Culimada Soomaaliyeed gobolka Ohio ee Mareykanka oo ka hadlay colaadda Sool (sawiro) – Radio Daljir
Culimada Soomaaliyeed gobolka Ohio ee Mareykanka oo ka hadlay colaadda Sool (sawiro)
Oktoobar 29, 2018 6:51 b 0
Dalada Culumada gobolka Ohio ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SICO (Somali Islamic Centers Of Ohio) ayaa soo saaray Baaq Nabadeed oo ku aadan colaada Gobolka Sool.
Waxay culumadu ku tilmaameen dagaalkaasi in uu yahay mid xaaraam ah isla markaana aan ka tarjumayn islaamnimada, Dhaqanka, iyo Aqlaaqda suuban midna.
Dadka deegaanka ayay ugu yeereen in ay si aan kala har lahayn ugu istaagaan soo afmeerida dhiiga daadanaya iyada laga cabsanayo musiibo aaqiro iyo mid aduunba.
Culumada ayaa dhinacyada dagaalamaya ugu yeeray in ay wada hadlaan isla markaana ka waantoobaan in ay caruurtooda, Hantidooda, iyo Naftoodaba ay ku haligaan dagaal wax natiijo ah oo ka soo baxayaa aysan jirin.
Garabyada ay dirirtu dhexmartay oo sida la sheegay ah dad wada dhashay waa musiibo aan indhaha laga qarsan karin loona baahnayn in ay dib u soo laabato ayay dhaheen culumada oo dhanka kale uga tacsiyeeyay dadkii ay ka dhinteen dadkii halkaasi lagu laayay kuwa dhaawaca ahna alle uga rajeeyay caafimaad.
Dowlada Soomaaliya iyo maamulada Jaarka la ah deegaankaasi ayay ka codsadeen in ay ka qeyb qaataan daminta colaada isla markaana fidiyaan gogol Nabadeed.
Waxay culumadu wax laga xumaado ku tilmaameen in dadka qaar ay dagaalkaasi ka hurinayaan dhanka Social Media ha taasna ay tahay wax laga xumaado iyaga oo ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha Bulshada in aysan u adeegsan daadinta dhiig walaalkood.
Ugu danbeeyn culumadu waxay u duceeyeen Dalka iyo Dadka iyaga oo alle uga baryay Nabad iyo xasilooni.
Wasiir Kuxigeenka Caafimaadka Puntland: “Goobaha Caafimaadka kama shaqayn doono qof aan haysan shahaado sax ah (dhegayso)
Ergo Nabadeyn oo ku baxay colaadda deegaanka Dhumay (dhegayso)